NEWS FEED – Nepal Online Khabar
Apr122021 by Nepal KhabarNo Comments
हरिद्वार : श्रीपंचायती अखाड़ा निरंजनी पीठाधीश्वर आचार्य महामण्डलेश्वर स्वामी कैलाशानन्द गिरिले महाराजधिराज ज्ञानेन्द्र शाहको सरलता नै उहाँको शक्ति भएको बताउनु भएको छ। स्वामी कैलशानन्दको निमन्त्रणामा भारतको हरिद्वारमा जारी कुम्भ मेलामा सहभागी हुन पुग्नु भएका शाह छिट्टै नेपालको राजाको रुपमा पुनस्थापित हुने बताउनु भएको हो। विशेष कुराकानी गर्दै स्वामी कैलशानन्दले भन्नु भयो जुन राज्यको राजा धा'र्मिक छ, आध्यात्मिक छ, सा\_धुहरुको सेवा गर्छ। त्यो ठाउँमा परम्परा शिथिल हुन सक्छ तर लुप्त हुन् सक्दैन। त्यसैले राजा ज्ञानेन्द्र नारायण रुपमा, विष्णु रुपमा पुन: स्थापित भएर नेपाल र नेपालीलाई रक्षा गर्नु हुनेछ, संरक्षण गर्नु हुन्छ र नेतृत्व गर्नु हुनेछ। राजा ज्ञानेन्द्रलाई जारी कुम्भ मेलमा भारत वर्षका ठूला भन्दा ठूला पुज्य सन्तका आशिर्वाद प्राप्त हुनेछ जसले त्यो यात्रा सहज हुनेछ।’ स्वामी कैलशानन
भिम रावल भन्नुहुन्छ : प्रधानमन्त्रीले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी कता हालेछन् ?
काठमाडौं : नेकपा (एमाले)का नेता भीम रावलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी कता हालेछन ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् । आइतबार धनगढीमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै उनले राष्ट्रपतिले वित'रण गरेको पदकको त'क्मामा नेपालको नक्सामा समेटिएको भूमि नराखिएको भन्दै आ'पत्ति जनाएका हुन् । “लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी कता पु¥र्‍याउनुभएछ प्रधानमन्त्रीले ? उहाँको गृह मन्त्रालयबाट स्प'ष्टीकरण आएको छ । स्प'ष्टीकरण सुन्दा दुःख पनि लागेको छ, आ'श्चर्य बढी लागेको छ । गृह मन्त्रालयले भन्छ, तक्मा दिने निर्णय पहिल्यै भएको थियो । सार्वभौ'मसत्ताको अभ्यास गर्ने जनप्रतिनिधिले एक मतले पारित गरेपछि पहिल्यै निर्णय भएकाले नराखिएको भनेर ढाँ'ट्ने ? राष्ट्र'हि'तविपरी'त चिन्त'न । कानुनी र राजनीतिक दृ'ष्टिकोणबाट गृह मन्त्रालयको तर्क ग'लत छ,” उनले भने । आफ्नो भूमि समेटेर प्रतिनिधिसभाले पार
धादिङ : यी हुन् गजेन्द्र आछमी । न त जाडो, न त घाम न पानी केहीकाे परवाह छैन उनलाई । गोलो बाटुलो अनु`हार अनि हरियो र रातो मिसिए`को गल`बन्दी लगाएका । फस्नर नभएको कालो ज्याकेट अनि का`लो पाइन्ट । नौबिसे खो`लामा टोलाउने, भो'क लागे होटल च'हार्ने, सुत्न परे नौबिसे खोलाकै पुल`मुनि जाने । यसै`गरी बित्ने गरेको छ गजेन्द्र आछामीको दैनिकी । केही वर्ष`अघि`देखि मान`सिक सन्तुलन गुमा`एका गजेन्द्रका बुबा गोरे सार्की र आमा मंग`ली सार्कीको मृ’त्यु भए`पछि उनी एक्लो र बेवा`रिसे बनेका हुन् । उनको अवस्था हेर्ने हो भने न दाजुभाइ, न सम्पत्ति केही नभएको र व्यवहा`रिसे जस्तै बस्दै आएका छन उनी । तर गजेन्द्र आछामीको धादिङ्ग जिल्ला धुनि`बेशी नगरपालिका वडा नं ८ टापुडाँडामा घर सम्पत्ती र २ दाजुहरु पनि छन् । तर गजेन्द्र करीब २ वर्ष देखि यसैगरी त्रिभुवन राज`पथको धुनिबेँशी नगरपालिका वडा नं ६ र ७ को सिमा पर्ने
हुम्ला : हिमालपारिको गाउँ लिमीबाट चार दिन पैदल हिँडेर योजनाको सम्झौ'ता गर्न स्थानीय बासिन्दा सद'रमुकाम सिमकोट आइपुगेका छन् । प्रदेश र स'ङ्घीय सरकार मातहतका कार्यक्रम सदरमुकाम सिमकोटमै भएको कारण न्यालु लेकको हिउँ छि'चोल्दै उनीहरू सदरमुकाम सिमकोट आइपुगेका हुन् । नाम्खा गाउँपालिका–६, हल्जीगाउँमा तटब'न्धन बनाउने योजनाको डिभिजन वन कार्यालयसँग स'म्झौता गर्न सिमकोट आइपुगेको निर्माण उपभोक्ता समितिका सदस्य तुण्डुप तामाङले बताए । गाउँमा गठन गरिएको उपभोक्ता समितिले सो कार्यालयसँग सम्झौ'ता गरेको उनले जानकारी दिए ।लिमीका बासिन्दाले विकास निर्माणका काम गर्न चार दिन पैदलै हिँडेर स'म्झौताका लागि सदरमुकाम सिमकोट धाउनैपर्ने बा'ध्यता रहेको छ । चार दिन हिँडेर सिमकोट आइपुगेको र योजनाको सम्झौता भएकाले अब गाउँ फर्केर निर्माण कार्य सुरु गरिने तामाङले उल्लेख गरे । त्यसैगरी वडा कार्यालय भवन र स्टोर भ
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन कुमार थापाले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काममा ढिलाई भएकोप्रति काठमाडौंबासीसँग माफी माग्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उल्टै उ'द्घाटनको त'मासा गरेको बताउनुभएको छ । विहीबार (आज) प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद थापाले भन्नुभयो, ‘काठमाडौंबासीलाई समयमा पानी खुवाउन ढिला ग¥यौं । यो आयोजनाबाट हामीले धेरै कुरा सिकेका छौं । अब यस्तो गर्दैनौं भन्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीले पनि, हामीले पनि । सिक्नुपर्ने बेलामा कहिले धारा खोलेर, कहिले बा'ल्टी थापेर, कहिले उठेर, कहिले बसेर उ'द्घाटन गरेको छ । तमासा गरेको छ । च'मत्कार भयो भनेको छ ।’यस अगाडि उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्री ओलीलाई सडक र पुलको शिलन्यास गर्न र उद्घा'टन गर्न भ्याई–नभ्याई भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले भनिराख्नुभएको छ, ‘यति धेरै विकासको काम कहिल्यै भएको छैन । यो त च'मत्कार नै भयो ।’ उहाँले
काठमाडौँ : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रका विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पु¥र्‍याएका व्यक्तिलाई आज राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित समारोहमा विभिन्न मानपदवी, अ'लङ्कार र पदकबाट सु'शोभन गर्नुभएको छ । नेपालको संविधानको धारा २७७ को उपधारा १ बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा विभू'षण प्रदान गरिदै आएको छ । सरकारले प्रदान गरेको उक्त पदकमा भने सरकारले गत वर्ष अनुमोदन गरेको चु'च्चे नक्सा सहितको नयाँ नक्सा राखिएको छैन । सामाजिक पदक पाउनेहरुले उक्त पदक सामाजिक सञ्जालमा राखेपछि उक्त विषयले चचाृ पाइरहेको छ । तर यस विषयमा गृहमन्त्रालयले भने, यो पो'होर सालकै पदक रहेको र पोहोर पदकमा पहिल्‍यै छापिएर आइसकेकाले चु'च्चे नक्सा सहितको नयाँ नक्सा राख्न नमिलेको दा'बी गरेको छ ।गृ'हमन्त्रालयका अनुसार पदक लिन बाँकी रहेकाहरुलाई वैशाख १ गते नयाँ नक्सासहितको प'दक प्रदान गरिने छ ।
Apr102021 by Nepal KhabarNo Comments
काठमाडौं : जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हर्क'तबाट देशलाई बचाउन जिम्मे'वारपूर्ण ढंगले काम गर्ने बताउनु भएको छ । शनिबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमपछि सञ्चारक'र्मीसंग कुरा गर्दै अध्यक्ष भट्टराईले शुक्रबारबाट नयाँ सरकार गठनका लागि औ'पचारिक छलफल शुरु भएको बताउनुभयो । उहाँले एउटै पार्टीले ठोस निर्णंय गर्नु भन्दा पनि सबै पार्टीहरुसँग सम्बा|द गरेर मात्र नि'ष्कर्ष निकाल्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो । अध्यक्ष भट्टराईले केपी शर्मा ओलीको ह'र्कतबाट देश र जनतालाई मु'क्ति दिलाउन जिम्मे'वारी पू\_र्ण ढङगले काम गर्ने पनि बताउनुभयो । ओली सरकारलाई छिट्टै विदाई गर्ने तयारी भइरहेको पनि उहाँको जि'किर थियो । जनता समाजवादी पार्टीमा दुर्ई धार नभएको तर दुई विषय हुँदा आम जनता भ्र'ममा परेको पनि भट्टराईको दावी थियो ।
म्यासेज लिक हुँदै भाईरल भएपछि महाबिर पुनको आ’क्रोश, यस्तो रहेछ वास्तविकता ।(भिडीयो सहित)
काठमाडौं : राष्ट्रिय आविस्कार केन्द्रका महाबिर पुन अहिले सामाजिक संजालमा आलो’चित भएका छन । उनले मगर थर कै एक जनासंग गरेको मेसेन्जरको कुराकानी लि’क भएपछि वि’वादमा आएका हुन् । पर्वतकी एक महिला हराएको हुनाले खोजि दिन भन्दै पुनले आफ्नो फेसबुकमा स्टाटस राखेको विषयमा आशा शरु मगर नाम गरेको एक जनाले पुनलाई गलत अर्थ लगाई अप’शब्द प्रयोग गरेको हुनाले पुनले पनि केहि गलत शब्दहरु प्रयोग गर्न पुगेको भन्दै स्प'ष्टिकरण दिएका छन। पुनले उन लाई जवाफ दिने क्रममा ब्रा'म्हण जातीलाई असर पर्ने खालको शब्द प्रयोग गरेको हुनाले उनि आ'लोचित भएका हुन् । तर उक्त विषयमा महाबिर पुनले सम्झाउने क्रममा अ'नियतबस निस्केको शब्द भन्दै माफी समेत मागेका छन । स्प'ष्टिकरण दिदै महाबिर पुनले राखेको फेसबुक स्टाटस जस्ताको त्यस्तै : लौ सुन्नु होस्, मेरो भनाई— आशा शरु मगर भन्ने एक जना फटाह मगर लाई सम्झाउने क्रममा अनियत बस चु’तिय
देउवा र ठाकुर खुलेरै लागे ओलितिर, प्रचण्डले समर्थन फिर्ता लिएकै दिन समर्थन गर्ने घोषणा !
काठमाडौं : नयाँ समीकरण निमार्णको विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग जनता समाजवादी पार्टीका पहिलो अध्यक्ष महन्थ ठाकुर निक'टता बढ्दै गएपछि पार्टीभित्र वि'वाद उत्क'र्षमा पुगेको छ । अध्यक्ष ओली र ठाकुरबीच बढ्दै गएको सम्बन्धप्रति अर्को लाइनको नेतृ'त्व गरिरहेका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव झस्किएका छन् ।अध्यक्ष यादवलाई पार्टीका संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा। बाबुराम भट्टराईले साथ दिएका छन् । भट्टराई र यादव कुनै पनि अवस्थामा एमालेसँग मिल्ने पक्षमा देखिएका छैनन् । यादवले सार्वजनिक रुपमै ‘दिमाग खु'स्केकाहरु मात्र ओलीसँग मिल्नेछन्, हामी मिल्दैनौं’ भन्ने गरेका छन् । तर उनकै पार्टीका अध्यक्ष ठाकुर ओलीसँग मिल्न अन्तिम तयारी गर्दैछन् । यसबीच प्रधानमन्त्री र ठाकुरबीच धेरैपटक भेट भइसकेको छ । कहिले एक्लै र केहीले गो'प्य भइरहेको छ । ठाकुरनिकट नेता तथा कार्यदलका सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले जिल्ला सरकारी वकिल क
Apr92021 by Nepal KhabarNo Comments
विदेश बाट घर फर्कदै हुनुहुन्छ? कतिसम्म सुन लान पाईन्छ ?
एजेन्सी : विदेशबाट नेपाल फर्कंदा केहि मात्रामा सुन ल्याउन पाउने नीति धेरैलाई थाहा छ तर यसको बिषयमा स्पष्ट भने थाहा नहुन सक्छ । गत कात्तिक १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विदेशबाट फर्केका यात्रुले ल्याउने सुन तथा सुनका गहना तथा व्यापारिक प्रयोजनका लागि ल्याइने सुन तथा चाँदीमा लाग्ने भन्सार महसुल बढाएको थियो । पछिल्लो नियम अनुसार विदेशबाट नेपाल फर्कने यात्रुले ५० ग्रामसम्मका सुनका गहना लगाएर आउँदा कुनै शुल्क तिर्नुपर्दैन तर ५० ग्रामभन्दा बढी १०० ग्रामसम्मका सुनका गहनामा भने प्रति १० ग्राम ८ हजार ५ सय रुपैयाँका दरले भन्सार महसुल तिर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तोकि: यदी तपाइँले ५० ग्रामसम्मको सुनको गहना ल्याउनु भएको छ भने कुनै शुल्क तिर्नुपरेन तर ६० ग्राम ल्याउनुभएको छ भने ५० ग्रामसम्म निशुल्क भएपनि थप १० ग्रामको रु. ८५००/- शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ । यही दरले ७० ग्रामको १७,०००/-, ८०